रवि लामिछाने को अक्सिजन वितरण अभियान शुरू : अब कोही मर्दैन अक्सिजन नपाएर ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/रवि लामिछाने को अक्सिजन वितरण अभियान शुरू : अब कोही मर्दैन अक्सिजन नपाएर !
रवि लामिछाने फेसबुक स्टाटस मा लेख्छन् :
हाम्रो टिम नेपालका साथीहरूले केहि सिलिन्डर अक्सिजन प्रदान गरेर ठुलो गुण लगाएका छन् । आजैबाट जनमैत्री अस्पतालमा बिरामीहरुको सेवा चाहिँ शुरु भैसकेको छ। पुर्ण प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न झन्डै २०० सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक छ। अक्सिजनको जोहो गर्न हामी सबै लागिपरेका छौ।सबैलाई गुहारेका छौ। भरी वा खाली सिलिन्डर भए खबर गर्नु होला। **** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
यो पनि:विराटनगर । चैत तेस्रो साता । बेलबारी नगरपालिका-४ मोरङका नवीन खवास, बुबाको उपचारका लागि नोबेल मेडिकल कलेज आइपुगे । उपचारपछि बुबा विनोद वैशाख १५ गते डिस्चार्ज भए ।